भारतबाट आयो नसोचेको खबर ! मोदिले लिए एक्सन - सिधा मिडिया
११ पुष २०७८, आईतवार ०५:३६ मा प्रकाशित
608 जनाले पढ़िसके
भारतमा कोभिड १९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमोक्रन’ को संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा ६ हजार ६५० जना नयाँ संक्रमित पहिचान हा ३५८ जनामा ओमोक्रन देखिएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ। यससँगै भारतमा करिब ६०० जनामा नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भएको छ।
यस्तै, संक्रमणका कारण भारतमा थप ३७४ जनाको मृत्यु भएको छ। हाल भारतमा ४७ हजार भन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेका छन्। ओमोक्रन संक्रमण फैलिनबाट रोक्न फेरि भिडभाड नगर्न भन्दै राज्य सरकारहरुले विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्। महाराष्ट्र, दिल्ली लगायतका राज्यमा नयाँ भेरियन्टको प्रभाव धेरै नै देखिएको छ।
नयाँदिल्लीस्थित लोक नायक अस्पतालका निर्देशक डा. सुरेश कुमारले दिल्ली र मुम्बईका व्यस्त विमानस्थलहरूबाट दैनिक सयौं यात्रुहरू आउने गरेका कारण पनि संक्रमितको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको जनाएका छन् । उनका अनुसार पछिल्ला दिनमा संक्रमणमा देखिएको तीव्र वृद्धि र पुष्टि भएकाहरूमा कुनै लक्षण नदेखिनु खतराको घन्टीका रूपमा लिन सकिने बताए ।
यसैबीच, ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि दिल्ली सरकारले क्रिसमस तथा नयाँ वर्षमा मनाइने उत्सवहरूमा रोक लगाएको छ । सरकारले जिल्ला अधिकारीहरूलाई क्रिसमस र नयाँ वर्षमा हुने सम्भावित उत्सवमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै, बजार तथा सार्वजनिक स्थलमा बिनामास्क प्रवेशमा निषेध गर्न, रेस्टुरेन्टहरूलाई कुल सिट संख्याको आधा क्षमतामा मात्र सञ्चालन गर्नलगायतका नियममा कडाइ गर्न भनिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ओमिक्रोनको बढ्दो संख्यालाई लिएर चिन्ता जाहेर गरेका छन् । उनले बिहीबार उच्चस्तरीय अधिकारीहरूसँग भाइरसको फैलावट र यसको नियन्त्रणको तयारीबारे समीक्षा गरेका छन् ।